भूकम्पपीडितको सिइओ ज्ञवालीलाई प्रश्न, 'चार वर्षसम्म पनि पीडितको गुनासो किन सम्बोधन भएन?' :: PahiloPost
13th March 2019, 10:34 am | २९ फागुन २०७५
मेलम्चीः २०७२ साल वैशाख १२ गते गएको भूकम्पका कारण सिन्धुपाल्चोक जिल्ला धेरै प्रभावित बन्यो। भूकम्पकाका कारण सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकामा १३ हजारभन्दा बढी घरहरू क्षति भएका थिए।
तर भूकम्प गएको चार वर्ष पुग्न लाग्दा समेत भूकम्प पीडितको पीडा कम भएको छैन।
मेलम्ची नगरपालिका अन्तर्गतका धेरै वडा गुनासाले भरिएका छन्। ९ सयभन्दा धेरै गुनासा सम्बोधन हुन सकेका छैनन्। अझ गुनासोमा समेत नाम नपरेका धेरै छन्। त्यसकारण अझै मानिसहरू अरूको जग्गामा छाप्रोमा बस्न बाध्य छन्।
यसैबीच फाल्गुन १८ गते सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची नगरपालिका वडा १ मा अवस्थित इन्द्रेश्वरी माध्यमिक विद्यालयमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले नेशनल डेमोक्रेटिक इन्स्टिच्युटसँगको सहकार्यमा सार्वजनिक सुनुवाइ आयोजना गरेको थियो।
सुनुवाइ कार्यक्रमअघि नै उनले हामीलाई भनेका थिए, 'कार्यकारी अधिकृतसँग गुनासो राख्ने हो। घर भत्कियो। अलि अलि पैसा जम्मा गरेर बनाएको टहरो पनि भत्काइदियो। प्रहरी र स्थानीय तहमा उजुरी गरेँ। हामी मिलाउँछौँ भन्छन्। आशा गर्दै बित्ने भयो जीवन।'
उनले यसो भन्दै गर्दा ५४ वर्षे अनिरुद्र दुलालले भने ' नाम दर्ता गराउने बेला घर हेर्न आउनेले गल्ती गर्‍यो। राहत पाउनु पर्नेले पाएका छैनन्। पीडित टहरामै छन्।'
प्राधिकरणबाट खटिएका इन्जिनियरले आफ्नो घर रहेको स्थानमा बस्न हुन्न अरू ठाउँमा बस भनेपछि त्रसित बनेका उनीहरूसँग कहाँ बस्न भन्ने समस्या थियो। पछि सबै मिलेर नजिकैको गाउँमा समथर जग्गा भाडामा लिएको बताउँछन् उनी। सरकारले विस्थापितहरूलाई दिने भनेको राहत रकम दिए जग्गा आफ्नो नाममा गरेर घर बनाउन पाउने उनको तर्क थियो।
भूकम्पपीडितको सिइओ ज्ञवालीलाई प्रश्न, 'चार वर्षसम्म पनि पीडितको गुनासो किन सम्बोधन भएन?' को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।